Baahin: Khamiis, Jul 14, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Guddiga diyaarinta shirka wadatashiga Somalida oo kulamo la yeeshay madaxda dawlada federaalka ah; Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo deeq lacageed gaarsiiyey dad danyar ah; Kulan lagu gorfeeyey horumarinta dhaqanka & af-Somaliga oo lagu qabtay xarunta jaamacada PSU, Garowe; Dawlada hoose ee Buurtinle oo bilawday qorshe sare loogu qaadayo wax-qabadka degmada ee dhinacyada amngia & mashaariicda bulsheed. – Radio Daljir
Baahin: Khamiis, Jul 14, Weriye Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Guddiga diyaarinta shirka wadatashiga Somalida oo kulamo la yeeshay madaxda dawlada federaalka ah; Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo deeq lacageed gaarsiiyey dad danyar ah; Kulan lagu gorfeeyey horumarinta dhaqanka & af-Somaliga oo lagu qabtay xarunta jaamacada PSU, Garowe; Dawlada hoose ee Buurtinle oo bilawday qorshe sare loogu qaadayo wax-qabadka degmada ee dhinacyada amngia & mashaariicda bulsheed.
Luulyo 14, 2011 12:00 b 0
Tahriibayaal Soomaali ah oo laga soo tarxiilay Sucuudiga oo Muqdisho soo gaaray.
Baahin: Arbaca, Jul 13, Weriye Jaamac C/raxmaan ~ Daljir ~ Galkacyo. Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo ku eedeeyey Somaliland in ay colaad ka hurinayso gobolka Cayn; Wasaarada haweenka ee Puntland oo u soo bandhigtay mudanayaahsa baaralmaanka qorshe lagu dabargoynayo gudniinka fircooniga ah; Taliyana ciidanka dawlada ee gobolka Hiiraan oo ka xog warramay dagaal ay isaga hor yimaadeen Al-shabaab; Arday ka qalinjabisay machadka Al-furqaan oo shahaado la guddoonsiiyey.